Channel Turhan Na-ekwupụta Ọwa Istanbul | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNkọwa nke Channel Turhan na Channel Istanbul
18 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Channel Istanbul, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Mgbasa ozi, Turkey
Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, kwuru na usoro nhazi maka Kanal Istanbul na-aga imecha wee kwuo, er na mkparịta ụka maka ego na-aga n'ihu. Ndị China nwekwara mmasị, mana nke kachasị baa uru bụ mba Benelux. Ha bụ ma teknụzụ na mba nwere ahụmịhe ọrụ ha. Minista Turhan kwuru na nha ọrụ a bụ ijeri dollar 20.
Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa kwuru na usoro EIA agwụla, ma na-aga imezu atụmatụ a na Kanal İstanbul. “Ọnọdụ ego dị mma karịa afọ a ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Mba Benelux nwere mmasị, anyị bidoro mkparịta ụka ”. onwe Minista Turhan, onye ọbịa n'ụlọ ọrụ Ankara zara azịza banyere ajụjụ a. N'ikwu na usoro EIA agwụla ma usoro nhazi a na-achọ ịkwụsị na Channel Istanbul, Minista Turhan kwuru, "Bosphorus, ọbụna Dardanelles, na-enwe ihe isi ike iji gboo mkpa njem ụgbọ mmiri. Anyị nwere ikike ịgafe ụgbọ mmiri 25 puku kwa afọ na Bosphorus. N'ọnọdụ kachasị mma anyị na-agbago puku 40. Na 2013, 40 rịgoro puku, mgbe ahụ 35 gbadara puku kwuru puku. Ugbu a omume a amalitewala ịba ụba. Ọnọdụ akụ na ụba nke mba Eshia ga-amalite nke nta nke nta, na mgbe ngwongwo ndị a na-emepụta na China na ọbụna ngwaahịa ndị mepụtara na North Asia meghere ụwa site na ọdụ ụgbọ mmiri na Oké Osimiri Ojii, 70 ga-achọ puku gafere. Ọ gaghị ekwe omume ịgafe Bosphorus. Kanal Istanbul bu oru iga njem, odi nkpa ka anyi mezuo ihe anyi choro na uzo a.
Turhan kwuru na ha na-aga n'ihu na mkparịta ụka gbasara ego. "Ndị China nwekwara mmasị mana ndị kacha nwee mmasị bụ mba Benelux. Ha bụ ma teknụzụ na mba nwere ahụmịhe ọrụ ha. Ha kwuru na ha nwere ike inweta ego. N'afọ a, ọnọdụ ego dị mma karịa afọ gara aga. Ka ọ dị ugbu a, enwere ahịa ahịa na-akwụsi ike na Europe, ebe ọnụego ọmụrụ nwa dị obere. Anyị kwesịrị inyocha gburugburu ndị a nke ọma. Dabere na ego ịchọrọ, 20 bụ oru ngo nke ga - eru ijeri dollar. A ga - eji ijeri dọla 5 nke oru ngo ahụ chụpụ akụrụngwa ndị dị adị maka ụzọ, ike na usoro njem ga - emetụta ọrụ ahụ. A ga-eme ihe nro mbụ maka nke a. Anyị na-atụ anya inweta ego dị ka otu ijeri dollar kwa afọ site na njem ụgbọ mmiri ..
(Benelux bụ nkwonkwo ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọrịta dabere na ịdị n'otu mpaghara nke Belgium, Netherlands na Luxembourg.
Map nke Kanal Istanbul
Nkwupụta Ịntanetị Dị Mkpa si Turhan Istanbul
Gebze si Minista Turhan Halkalı Nkọwa nke Suburban Line
Minista Turhan na-ekwupụta "Channel Istanbul agaghị atụgharị"
IBB President Mevlüt Uysal mara ọkwa Channel Istanbul
Onye njem ọhụụ ọhụrụ Turhan na-ekwupụta na ị nwere nsogbu
Ozi ụwa nke ụgbọelu nke ụwa si n'aka Minista Turhan
Mkpa Minista Turhan Banyere Banyere Transportgbọ njem…
Minista Turhan: 'Anyị ga - enweta High Speed ​​Sets si Germany'
3 si Minista Arslan. nkọwa ụgbọ elu
Minista Arslan kwupụtara BTK Railway Project
Gịnị bụ Benelux